Phones | Net Guide
GeForce MX350 ၊ Core i7 ပါဝင်တဲ့ Lenovo Xiaoxin Air 14 2020
Xiaomi Mi Mix Alpha ကို မကြာမီ ရောင်းချလာတော့မည်
အမေရိကန်ကျောင်းသားများကို စပိုင်လုပ်မှုအတွက် Google ကို နယူးမက္ကဆီကိုတရားစွဲ
Xiaomi ရဲ့ 2019 ခုနှစ် ဝင်ငွေ ယွမ် ဘီလီယမ် 200 အထိ မြင့်တက်လာခဲ့
Best 64MP Camera Phones That You Can Buy In 2020
MWC 2020: everything to expect from the world’s biggest mobile phone…
iPhone SE2(aka iPhone 9) : Everything We Know So…
Unitek Hard Disk Docking Station
HP Laser Jet Pro M404dn Printer
Website & Facebook စာမျက်နှာများ
Meditopia : Meditation, Sleep
Home Products Phones
kay khine - February 24, 2020
Phones kay khine - February 17, 2020
မျက်နှာပြင်ကြီးကြီး၊ ဘက်ထရီစွမ်းအားကောင်းတဲ့ ဖုန်းကိုင်ချင်သူများအတွက် Xiaomi ရဲ့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး သုံးစွဲလို့ကောင်းတဲ့ Mi Max Series ထဲက Xiaomi Mi Max2အပြင် နောက်ထပ်မော်ဒယ်တစ်ခုအနေနဲ့ Xiaomi Mi Max3တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mi Max3ဟာ သူ့အရင်မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ Mi...
Phones author 1 - February 17, 2020
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 စက်တင်ဘာလလောက်က Vivo ရဲ့ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Vivo V17 Pro ကို စတင်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ သုံးစွဲနိုင်ပြီး Nano Dual SIM စနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 159 x 74.7 x 9.8...
HONOR ရဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား အရည်အသွေးမြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ HONOR 20 Lite ဟာ ကင်မရာဦးစားပေးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သလို စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်မှု ရှိပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ သုံးနိုင်ပြီး Single SIM နဲ့ Dual SIM ဆိုတဲ့ version မျိုးကို...
Samsung Galaxy A Family ရဲ့ မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy A51 ကို ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က စတင်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမိုဘိုင်းလ် ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်ရှိလာ ခဲ့ပါပြီ။ ၎င်းဟာ မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်၊ ဘက်ထရီစွမ်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ စက်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန် တဲ့ အဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး ကင်မရာစွမ်းအားကလည်း အထူးကောင်းမွန်တာကြောင့် Camera Phone တစ်လုံးလို့တောင်...
Phones kay khine - February 10, 2020
Oppo Reno2ဟာ ဒီဇိုင်းပုံစံဆန်းသစ်လှပတဲ့ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး ထည့်သွင်းထားတဲ့ Specs တွေကလည်း အရည်အသွေးမြင့်မားလှပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အပေါ်ဘက်မှာ အလိုအလျောက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Motorized pop-up ကင်မရာကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေ မှာသုံးနိုင်ပြီး Nano Hybrid Dual SIM...
2019 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ရှိလာတဲ့ Huawei Nova 5T ဟာလည်း မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်၊ ကင်မရာစွမ်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ သုံးစွဲရတာ အဆင်ပြေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ သုံးနိုင်ပြီး Nano Dual SIM စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 154.3 x...
Phones author 1 - February 10, 2020
OnePlus ရဲ့7နဲ့7Pro ကို ဒီတစ်ပတ်မှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။ OnePlus7က OnePlus7Pro ထက် အရွယ်အစား အနည်းငယ်ပိုသေးပြီး ဘက်ထရီစွမ်းအားလည်း နည်းနည်းလေး ပိုနည်းပါတယ်။ စျေးနှုန်းအရလည်း OnePlus7က ပိုမိုသက်သာပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ OnePlus 7...
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ Samsung Galaxy Note 10 Series က ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ အားလုံးစိတ်ဝင်တစားစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သလို ထွက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်း အားလုံးထင်မှတ်ထားအတိုင်းပဲ နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့် Specs တွေနဲ့ Features တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၎င်း Series ထဲမှာ Samsung...
Samsung Galaxy A7 VS Samsung Galaxy A9
Phones kay khine - February 3, 2020
2018 ထက် 2019 က ပိုပိုကောင်းလာတာကို 2019 ထက်လည်း 2020 က ပိုကောင်းလာဦးမှာ တွေ့မြင်နေပါတယ်။ ဖုန်းတွေ အပြိုင်အဆိုင် ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေ အပြိုင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ နှစ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဖုန်းတွေနဲ့တင် ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်း ရိုက်လို့ရလာပါပြီ။ ပထမက Single ကင်မရာ၊ နောက် Dual ကင်မရာ၊...
Phones author 1 - February 3, 2020
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 စက်တင်ဘာလက Xiaomi ရဲ့ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xiaomi Redmi Note 8 နဲ့ သူ့ထက်ပိုမိုအဆင့်မြင့်တဲ့ Pro version အနေနဲ့ Xiaomi Redmi Note 8 Pro ကို ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းတွေကို အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမိုဘိုင်းဖုန်းစျေးကွက်ထဲမှာ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။ Pro version ဖြစ်တဲ့အတွက်...
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 သြဂုတ်လလောက်က Realme ရဲ့နောက်ဆုံး မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Realme5နဲ့ Realme5Pro ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Realme5Pro ဟာ အဆင့်မြင့် Pro version ဖြစ်တဲ့အတွက် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Specs...
Realme5ကို ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 သြဂုတ်လလောက်က စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို GSM၊HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာသုံးနိုင်ပြီး Nano Dual SIM စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ 164.4 x 75.6...
author 1 - February 24, 2020
Huawei ရဲ့ Huawei Nova3& Nova 3i ကို ဒီတစ်ပတ်မှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ဖုန်းနှစ်ခုစလုံးမှာ Display ပိုင်းလည်း တူညီပြီး အခုခေတ်စားနေတဲ့ Notch ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစမတ်ဖုန်းတွေမှာ ရှေ့နောက်ကင်မရာပိုင်းတွေမှာ AI နည်းပညာကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး...
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 စက်တင်ဘာလလောက်က Realme ကနေ ၎င်းရဲ့ မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Realme XT ကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းအားကောင်းလျက်ရှိပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းဟာ ကင်မရာစွမ်းအား အလွန်ကောင်းမွန်သလို ဘက်ထရီစွမ်းအားလည်း မြင့်မားမှုရှိပြီး မျက်နှာပြင်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ စက်စွမ်းဆောင်ရည်လည်း မြင့်မားတာကြောင့် ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့...